SAMOTALIS: Khudbadii uu maanta Madaxweynuhu ka akhriyey Fagaaraha Xuska 18-MAY Oo ahayd mid dhinacyo badan taabanaysa halkan ka akhriso.
· Waxaynu yagleelnay qaran taabo-gal ah, oo buuxiyey dhammaan shuruudihii dawladnimo.
· Waxaynu tirtirnay keli-talisnimadii iyo nidaamkii ku dhisnaa amar ku taagleynta.
· Waxaynu meel-marinay doorashooyin xor ah iyo nidaam dimuqraadiyadeed oo ay inagaga dayan karaan dalal badan oo dunida laga aqoonsan yahay.
· Waxaynu xaqiijinay in aynu khilaafka dhexdeena ku xalinno xigmad siyaasadeed iyo xeer-beegtinimo salka ku haysa dhaqankeena soo-jireenka ah, iyadoo aanay cidina gacan ka geysan ama la ina dhexgelin, taas oo muujinaysa bisaylka Bulshada Somaliland.
· Waxaynu ku tallaabsanay horumar mug iyo miisaan leh oo wax-weyn ka bedelay adeegyada aasaasiga ah ee bulshada, kaabayaasha dhaqaale iyo hantida gaarka loo leeyahay.
· Haddii Soomaliyi wada noolaan kari weyday, wuxuu caqliga fayoobi ina farayaa inay iskeed u kala noolaato.
· Haddii wax la wadaagi kari waayo, waxa furan in wax la kala yeesho.
Sidaa darteed, Dadka iyo Dalka aan Odayga u ahay idiinma soo socdaan oo way tashadeen, ee duco-qabayaal idinkuna isku tashada oo aan kala turxaan la'aano.
Ka midho-dhalinta mabda'an aan ku doojinayey mustaqbalka dadkayga waxaan u soo maray dagaal qadhaadh iyo duruufo adag, waxaanan diyaar u ahay in aan u dulqaato tan iyo inta aan ku god-gelayo.
Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa "Biyo Sacabadaada ayuun baa lagaga dhargaa".
Dhinaca kale, maalgashigani wuxuu fursado shaqo u abuurayaa xoogga dhallinyarada dihin ee shaqo la'aantu hayso.
Mudanayaal iyo Marwooyin, -
Sidaa darteed, waxaa maamulkayga ka go'an in aannu xoojinno xidhiidhka iyo wada-shaqaynta dalalka deriska ah, la iskana kaashado adkaynta amniga, la-dagaalanka argagixisada, budhcad badeedda, Tahriibka, Faqriga, Gaajada iyo Kootarabaanka ama Ganacsiga Sharci-darrada ah i.w.m.
· Waxaan ugu baaqayaa Beesha Caalamka, gaar ahaan Dalalka Midawga Yurub, Maraykanka, Midawga Afrika, Jaamacadda Carabta, Dawladaha IGAD in ay garwaaqsadaan qadiyada iyo xaqa aayo-ka-tashiga Shacbiga Somaliland, isla markaana aqoonsadaan qarannimadooda.
· Waxaan xog-ogaal ka ahay in qaar ka mid ah madax-dhaqameedyada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Gobolka Sool iyo Sanaag Bari ay ku jirto tabasho iyo saluug. Somaliland waxay ku soo caano-maashay in khilaafka dhexdooda yimaadda ay ku dhamaystaan wada-hadal, is-qancin iyo isu-tanaasul.
· Shacbi-weynaha Somaliland waxaan ugu baaqayaa:
Wa Billaahi Taqwfiiq...